तपाईं एक मिनेटमा १० पटकभन्दा बढी परेला झिम्काउनुहुन्छ ? उसोभए बिरामी हुनुभयो | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more तपाईं एक मिनेटमा १० पटकभन्दा बढी परेला झिम्काउनुहुन्छ ? उसोभए बिरामी हुनुभयो
भदौ १९ गते, २०७६ - १२:०२
एजेन्सी । विशेषज्ञहरूका अनुसार, मानिसले एक मिनेटमा १० चोटि परेला झिम्काउँछ । तर तपाईंका परेला १० चोटिभन्दा बढी झिम्किए भने ब्लेफरोपाज्म नामक रोगको लक्षण हुनसक्छ ।
जन्मसँग सम्बन्धित स् शिशुको मांसपेशीको विकासमा समस्या आउँदा माथिल्लो परेलामा ब्लेफरोस्पाज्म हुन्छ । परेला झिम्काउँदा बच्चालाई हेर्न समस्या भइरहेको छ भने तत्कालै सर्जरी गर्नुपर्छ नभए दृष्टि नै गुम्छ ।
वृद्धावस्थासँग सम्बन्धित स् उमेर बढ्दै जाँदा ब्लेफरोस्पाज्म हुनु सामान्य छ । उमेर बढ्दा लिभेटर टिस्युले परेला उचाल्ने काममा अवरोध आउँछ । बूढो भएपछि दुवै आँखा प्रभावित हुन्छ ।
भदौ १९ गते, २०७६ - १२:०२ मा प्रकाशित